गैंडा चर्किरहेको | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Raging Rhino Slot अफ्रिकी वन्यजन्तु विषय आधारित छ. WMS गेमिङ जो केही अद्वितीय विशेषताहरु स्लट को एक केहि फरक प्रकार संग आएको छ. आफ्नो सूचना हुनेछ जो पहिलो कुरा यो सट्टा छ रील मानक पाँच छ छ. सुन्दर अफ्रिकी जंगली मुलुकमा एक बिट 3D शैलीमा कोरिएको केही साँच्चै सुन्दर प्रतीक द्वारा समर्थित छ जो पृष्ठभूमिमा मा डिजाइन गरिएको थियो. यो संग, यी सबै रील जो जीत तरिका को एक नम्बर प्रस्ताव चार फरक स्थितिहरू देखा पर्न सक्छन्.
गैंडा चर्किरहेको फील्ड मा तयार छ
गैंडा चर्किरहेको प्रतीक चार पङ्क्ति र साथ छ रील प्रदान गर्दछ 4096 different ways to win. जीत गर्न, तपाईं आसन्न रील मा निर्दिष्ट विजेता संयोजन गर्न छ. पशु ध्वनि को पूर्ण एउटा संगीत साथ पृष्ठभूमि मा घाम पृष्ठभूमि वास्तवमा जंगली मुलुकमा यो यात्रा मा तपाईं लोभ्याउन हुनेछ.
खेल एक बादर छ, एक नेवला, एक गोही र एक गैंडा तल्लो व्यक्तिहरूलाई जबकि उच्च कदर प्रतीक रूपमा सामान्य कार्ड प्रतीक हो 9, 10, जे, Q, K र एक.
जंगली प्रतीक एक अफ्रिकी रूख पछि एक सुन्दर सूर्य सेटिङले चित्रण गरिएको छ र यो रील दुई मा अंधाधुंध देखिन्छ, तीन, चार र पाँच. यो बोनस प्रतीक भन्दा अन्य सबै अन्य प्रतीकहरू ठूलो चम्केको हीरा छ जो कायममुकायम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि बोनस सुविधा ट्रिगर हुनेछ. यो गैंडा प्रतीक उच्चतम रकम भुक्तानी र यो सबै रील मा स्ट्याक गर्न सकिन्छ देखेको.
निःशुल्क spins मात्र बोनस प्रस्ताव छ गैंडा चर्किरहेको. को रील यी हीरे विभिन्न सेट लैंडिंग गरेर सजिलै ट्रिगर गर्न सकिन्छ. तिनीहरूले तपाईंलाई जसको लागि कम से कम बोनस ट्रिगर गर्न कम्तिमा नम्बर तीन हुनुपर्छ यद्यपि आठ spins छ, चार हीरे, अर्कोतर्फ, तपाईं पन्ध्र spins दिनेछु, पाँच बीस spins र छ हीरे बाहिर दिन्छिन् खेल मा उच्चतम छ पचास spins दिन्छ. तपाईं एक जंगली प्रतीक एक विजेता संयोजन गठन गर्न सक्षम हुनेछ भने, यो 2x वा 3x आफ्नो जीत गुणा गर्नेछन्.
गैंडा चर्किरहेको एक प्रसिद्ध स्लट छ र यसको प्रारम्भिक दिन देखि नै लागि उचित प्रशंसक-निम्न प्राप्त गरेको छ. यो उच्चतम जीत प्रदान गर्दछ 12,000 जो अक्सर मानिसहरूले यसलाई एक हिट दिन आकर्षित. केही खेलाडीहरू सामान्य payline संरचना संग अधिक आरामदायक फेला हुनत, अरूलाई अझै पनि यो स्लट खेल मा विभिन्नता आनन्द के.